विवाह पछि एकाएक मोटा भए यी बलिउड नायिकाहरु ! कोहि त हेर्नै नहुने गरी पनि मोटाए !
चैत २७, २०७५ Bigul Media | PS
एजेन्सी- विवाह पछि प्राय महिलाहरु मोटाउने गर्छन्। विवाह पछि मोटाउने डर हरेक युवतीहरुलाई सताउने गर्छ। विवाह पछि पनि वजन पहिलाकै अवस्थामा रहोस भन्नको लागि हरेक युवतीहरु विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन्।
यस्तै बलिउडमा आफ्नो फिगर र सुन्दरताको कारण चर्चित रहेका नायिकाहरु पनि विवाह पछि मोटाएको देख्न सकिन्छ। केहि नायिकाहरु विवाह पछि पनि आफ्नो वजनलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएका छन्। तर केहि नायिकाले भने यस्तो गर्न नसकेको देख्न सकिन्छ। विवाह पछि धेरै मोटाएका नायिकाहरु निम्न उल्लेखित छन्।
आफ्नो अभिनयको कारण बलिउडमा राम्रो ठाउँ बनाउन सफल भएकी नायिका विद्या बालनले आफ्नो करियरमा धेरै हिट चलचित्रमा काम गरिसकेकी छिन्। विवाह पछि उनको वजन धेरै बढेको कुरामा उनी ट्रोल हुने गर्छिन्। विवाह पछि अल्छि भएको कारण विद्या बालनको वजन बढ्यो भनेर समाचारहरु पनि आउने गरेका छन्। वजन र फेसनको कारण उनी धेरै ट्रोल हुने गर्छिन्।
बलिउडमा रानी मुखर्जी अहिले खासै सक्रिय भने हुन छोडेकी छिन्। उनी जिरो फिगर नायिकाको लिस्टमा कहिले पनि परिनन्। विवाह भन्दा अगाडी पनि हल्का मोटीनै रहेकी रानी मुखर्जी विवाह पछि झनै मोटाएकी छिन्। विवाह पछि आफ्नो वजनमा ध्यान नदिएको कारण उनको वजन पहिला भन्दा धेराओ बढेको छ।
मिस यूनिवर्स समेत भैसकेकी बलिउड अभिनेत्री लारा दत्ता फिटनेसको विषयमा धेरै सजक छिन्। उनी कुनै समयमा बलिउडकै फिट नायिकाको लिस्टमा पर्ने गर्थिन्। तर टेनिस प्लेयर महेश भूपतिसँग विवाह गरेपछि उनी विस्तारै मोटी हुँदै गएकी छिन्।
इलियाना डी’ क्रुज
दक्षिण भारतीय चलचित्र क्षेत्रमा धेरैनै चर्चित रहेकी नायिका इलियाना डी’ क्रुजले बलिउडमा पनि आफ्नो जादु चलाउन सफल भइन्। कुनै समयमा बलिउडकै सबै भन्दा उत्कृष्ट फिगर भएको नायिकाको लिस्टमा उनको नाम शिर्ष स्थानमा आउने गर्थ्यो। तर एन्ड्रीयू नीबोनसँग विवाह गरेपछि उनी विश्वासै गर्न नसकिने तरिकाले मोटाएकी छिन्। उनका तस्विरहरु केहि समय अगाडी धेरै मोटाएको भन्दै भाइरलनै भएको थियो।
प्रकाशित : बुधबार, चैत २७, २०७५१७:३०